Hamelomana indray ny fitenin-dry zareo ‘tandindonin-doza fatratra’, nampiseho fahaizana mamorona ireo Gitxsan mpampiasa aterineto · Global Voices teny Malagasy
Hamelomana indray ny fitenin-dry zareo ‘tandindonin-doza fatratra’, nampiseho fahaizana mamorona ireo Gitxsan mpampiasa aterineto
Manampy koa "hampitraka saina" mandritra ny COVID-19 ny fifaninanana virtoaly
Voadika ny 06 Janoary 2021 4:59 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Español, Português, Français, नेपाली, English, English
T-shirt sy satroka mampahafantatra ny fifaninanana Gitxsan Got Talent. Sary an'i Erica Williams, nahazoana alàlana.
Na tao anatin'ny valanaretina iray namely izao tontolo izao aza, nahita fomba mahavariana hitahirizana ny fiteniny ireo vondrompiarahamonina zanatany nanerana ny tany. Raiso ny vahoaka Gitxsan ao amin'ny Kôlômbià Britanika, Kanadà: tamin'ny Aprily teo, natsangan'i Cheyenne Raven sy Jessica Starlund, mpikatroka ho an'ny fiteny, ny vondrona Facebook iray ho entina mampahafantatra ny fiteny Gitxsan sy handrisihana ny fandraisana anjaran'ny vondrompiarahamonina amin'ny alàlan'ny karazana fandaharana momba ny talenta ety anaty tambajotra, nomeny anarana tsara hoe Gitxsan Got Talent.
Mihoatra ny 600 ireo mpikambana ao anatin'ilay vondrona izay tsy tapaka ny mandefa ireo hira malaza, tononkalo ary feo lafika nadikan-dry zareo ho amin'io fitenin'ireo Firenena Voalohany io, ny Gitxsanimaax/Gitxsanimx. Asaina ihany koa ireo mpikambana haneho hevitra momba ireny seho ireny, izay tsarain'ireo zokiolona avy ao amin'ilay foko, ary misy loka atolotra ho an'izay mpandresy.
Jessica Starlund, iray amin'ireo mpiara-nanorina ny fifaninanana Gitxsan Got Talent. Sary an'ny Talon Gillis Photography, nahazoana alàlana.
Araka ny voalazan'ny Tatitra 2018 momba ny Satan'ny Fitenin'ireo Firenena Voalohany Talohan'i J.C, manana mpiteny tsy miambakabaka miisa 523 ny fiteny Gitxsan ( Gitksan ihany koa any anaty loharano sasany), miampy eo amin'ny 983 miteny, mahazo izay lazaina na mianatra azy any amin'ireo vondrompiarahamonina Gitxsan enina ao amin'ny Kôlômbià Britanika. Nokilasian'ny UNESCO ho “tena tandindonin-doza” izy io, ireo zokiolona no tena miteny voalohany indrindra azy ary tsy tafita nankany amin'ireo andian-taranaka tanora.
Araka ny lazain'ny Dr. M. Jane Smith, avy amin'ny T’lemlaxamit no nipoiran'ny Gitxsan. Ny lohasaha ambony ao Skeena no tanindrazan'ireo razamben-dry zareo, any Avaratra-Andrefan'ny afovoan'ny Kôlômbià Britanika, faritra iray mbola ipetrahan-dry zareo hatramin'izao.
Manankarena amin'ny lovantsofina ny kolontsaina Gitxsan, ambara amin'ny alàlan'ny fiteny ary manome fomba fijery tena hafa tanteraka amin'ny fijery mibahana ananan'ny Tandrefana momba ny tontolo. Fomba fijery iray izay, hatry ny taonjato maro nifandimby, nandray anjara tamin'ny fanimbàna ny kolontsain'ireo vazimba teratany tamin'ny alàlan'ireo orinasa eorôpeàna mpanjanaka sy ireo fepetra faneriterena napetrak'ireo governemanta nifandimby. Fa mifanohitra amin'izany, omen'ny kolontsaina Gitxsan laharampahamehana ny vondrompiarahamonina sy ny fiainana mirindra miaraka amin'ny tany, fa tsy ny fisainana Tandrefana mankany amin'ny fitsitokotokoana sy ny harena hita maso.
Tsy toy ny sasany amin'ireo vondrompiarahamonina vazimba teratany ao amin'ny Kôlômbià Britanika, ny Gitxsan tsy mbola nanao sonia velively mihitsy fifanarahana tamin'ny governemanta Kanadiàna, ary tsy mbola novidiana tamin'izy ireo ny taniny — izay tsy milaza akory hoe tsy voakitik'ireo fepetra nataon'ny fanjakàna hamoretana ny kolontsainy sy ny teniny ry zareo.
Ireo kilasimandry — sekoly natao indrindra ‘hamonoana ny Indiàna, hamonjena ny olona,’ — dia nitondra vokadratsy, tsy hoe fotsiny tamin'ireo voatery nianatra tany amin'izy ireny, fa koa tamin'ireo fara sy dimbin'ny vahoaka Gitxsan. Ireny sekoly ireny dia niteraka fahatapahan'ny fombandrazana amin'ny fampitàna ny fiteny Gitxsab amin'ireo taranaka mandimby; ireo mpikambana avy ao amin'ilay foko nandeha nianatra tany dia, na tsy nianatra velively an'ilay fiteny , na voasazy mafy noho ny fitenenana azy ka noheverin-dry zareo fa sakana ho an'ny zanak'izy ireo ny fianarana azy io.
Pikantsary iray avy amin'ny tatitra vaovao, toetrandro ary fifamoivoizana avy amin'i Cheyenne Raven ho an'ny fifaninanana Gitxsan Got Talent. Potsiro eo amin'ny sary mba hahitàna ny lahatsary manontolo.
Tsy ny fanamby atrehan'ilay hetsika Gitxsan Got Talent ihany no lova navelan'ireo sekoly kilasimandry. Ny fitomboan'ny lanjan'ny fiteny anglisy ho toy ny fiteny erantany, ny filàna miteny azy io mba hahazoana izay asa heverina ho mendrika, ary ny fitomboan'ireo votoatin'ny fampahalalambaovao amin'ny fiteny anglisy dia samy mandray anjara amin'ny fahaverezan'ny fitenim-bazimba teratany daholo.
Ireo lafinjavatra ireo anefa no vao mainka mahatonga ilay vondrona Facebook Gitxsan Got Talent ho mahaliana bebe kokoa: amin'ny fampiasàna ny teknôlôjia izay efa natahorana hanafoana azy, nohavaozin'ilay vondrona ny fahalinana amin'ilay fiteny. Manana fampiasa amin'ny finday ihany koa ireo vondrompiarahamonina Gitxsan, samy azo hakàna azy na ny Google play store na ny Apple App store, izay ampiasain-dry zareo ho toy ny loharano hianarana ny fiteniny amin'ny alàlan'ny fihainonana tantara sy teny tononina.
Nisy tafa iray tanaty imailaka nifanaovana tamin'ny iray amin'ireo mpikarakara ilay fifaninanana tao amin'ny Facebook, Jessica Starlund. Araka ny voalazan'i Jessica, fahombiazana goavana ilay fifaninanana hatreto, “nahazo[ana] olona marobe noho izay noeritreretina.” Samy nandray anjara daholo ireo mpiteny, mpianatra ary mpiteny mangina avy any amin'ireo faritany Gitxsan, ary nandray anjara ihany koa ireo mpikambana avy amin'ny vondrompiarahamonina avy any amin'ny faritra an-tanandehibe. Tafiditra ao anatin'ny tanjon'ilay fifaninanana ny fanitarana ny fampiasàna ny fiteny Gitxsan any anatin'ireo sehatra malaza maromaro kokoa, tamin'ny fanaovana feo lafika amin'ny fiteny Gitxsan ho an'ireo zavatra toy ny lahatsary fiarovana amin'ny fiaramanidina, fizaràna anaty tantara malaza toy ny “Grey's Anatomy” na “Sesame Street” sy ny fihiràna amin'ny alàlan'ilay fiteny ireo hira malaza.
Tsy isalasalàna fa nanome aingampanahy ilay fifaninanana. Skyla Olivia, iray tamin'ireo mpandray anjara, izay nampiasa ny solonanarana “gitxsanbushgirl” tao amin'ny Youtube, dia namorona ity lahatsary stop-motion ity tamin'ny fandraisany anjara:
Nasongadiny fa tena navesa-danja manokana ilay fifaninanana virtoaly nandritra ny COVID-19, satria “fomba iray nentina nampiroborobo ilay fiteny avy any amin'ny elanelana virtoaly, azo antoka” ilay izy, ary manampy “hampitraka ny saina” eny anatin'ireo vondrompiarahamonina Gitxsan. Natao ho an'ny daholobe ilay vondrona Facebook noho ity antony ity indrindra: mba hahafahana mifanerasera amina olona Gitxsana betsaka araka izay tratra sy hampiroboroboana ilay fiteny, na nandritra ny valanaretina erantany aza. Nofaritan'ireo mpikambana ao anatin'ilay vondrona ho “tena manasitrana” ny fihainoana ireo firotsahana hifaninana, ary heverin'irey ireo ho “tsara hianarana” ireo lahatsoratra ao amin'ilay vondrona.
Lazain'i Starlund fa vao haingana ilay vondrompiarahamonina no nitady famatsiambola hametrahana akany iray ho an'ny fiteny atao ho an'ny ankizy kely — mitovitovy amin'ireo miasa ao Hawai’i, na ao Nouvelle-Zélande any amin-dry zareo Maori — mba hilonan'izy ireny ao anatin'ny fiteny Gitwsan sady hitombo hahay fiteny roa, Gitxsan sy Anglisy. Nametraka fangatahana famatsiambola ihany koa ilay vondrompiarahamonina mba hametrahana lasy ho an'ny kolontsaina sy ho an'ny fiteny ao anatin'ny faritra misy azy ireo.
Hetsika iray hafa manampy amin'ny fanavotana ilay fiteny ny fametrahana fandaharanasa Mpampianatra-Mpiana-draharaha mahomby, toy ireo ao California sy ireo fanjakana hafa ao Etazonia, izay ampiarahana zokiolona iray amina tanora iray mpikambana ao anatin'ny vondrompiarahamonina ka ny tenindrazan-dry zareo ihany no azony ifandraisana. Nahazo fanohanana ara-bola ihany koa ilay vondrona Facebook, tamin'ny endrika loka nomena na vola natolotr'ireo fikambanana ao an-toerana, ary tambin-karama ho an'ireo mpitsara izay mpiteny tsy miambakavaka ny Gitxsan. Loka vola no atolotra ho an'ireo mpandresy, ary misy ireo loka ho an'ny fandraisana anjara atolotra an'ireo izay nandefa fampidirana miavaka indrindra.
Mihoatra lavitra noho ny maha-toerana iray ahafahan'ny vondrompiarahamonina Gitxsan maneho ny heviny sy miala voly amin'ny fiteniny, lasa porofon'ny fitohizan'ny fahaizany mifandrindra sy ny maha-mafy toto ny vondrompiarahamonina Gitxsan ny Got Talent. Azon'ireo Gitxsan monina manerana izao tontolo izao atao ny miditra sy mandray anjara ao amin'ilay vondrona Facebook, izay tsy hoe fotsiny hanamafy ny fifamatorana eo amin'ny samy Gitxsan, fa koa eo amin'ny vahoaka Gitxsan sy ny fitenin'izy ireo.